imisebenzi lasisekelo ekufundzisweni kwelulwimi, ngisho nalapho Sinesithakazelo hhayi kuphela abalobi abo, ngokuvamile babekhetha emashalofini yomlando nothuli efudumele ubudala, kunokuba ngezandla futhi amathemba bayafuna abafundi ulwazi.
ingane ezingavamile Ngeza kuleli zwe nokuthola ulwazi ngolimi lwendabuko, hhayi ukusho ngesikhathi esithile futhi ngaphansi kwezimo kwesokudla, ukuthi abanye ulwazi esikoleni kanye nencazelo yegama elithi "crap" - kuyahambisana.
lokudlela Classical: ngokubona Inthanethi
Ngokusho ethandwa imithombo Inthanethi owaziwa futhi, crap - lena umbhedo, eqanjiwe, amanga, ezisungulwe. Kanye isenzo noma incazelo salo (ngokuvamile) akubalulekile noma okudukisayo. Zithanda noma zingathandi, kodwa ulwazi lomthengi Ngokwesilinganiso, umyalezo othile, cabanga ngaphambi kokuba, bese kuphela ukukhipha isinqumo: ". Crap ke"
Umbandela ukuhlolwa kolwazi - nelwatinchanti lwabo kanye nolwazi. Umbono ozakwabo, abangane, futhi abezindaba - futhi isihloko ukuhlolwa hhayi umhlahlandlela esenzweni. Ngokwemvelo, kokuhlaziywa kwamathenda abantu ezahlukene ngeke lifane, futhi isinqumo esifanele, kungase kungadingeki kungatholakala.
Into kuphela ngokubona iningi abathengi kolwazi kanye nasekuhlolweni ke ngomqondo "crap noma cha," cishe umuntu, ngakho-ke lokhu kumayelana izintela, izinhlawulo zokuphatha, Umbuso indawo izikweletu, noma okunye ukuxhumana kusuka ejensi kahulumeni kanye izenzo izikhulu.
Kodwa kuba kunalokho intela ukuze isiko kanye sengqondo, kunokuba umbono inhloso. Awukwazi ukushayela lazhey ukuthi kubalulekile, kodwa uqobo ingamukeleki bezikhali lomkhokhi, umuntu noma inkampani yenethiwekhi imisebenzi eqondile nenengqondo. Nokho, ngalesi sikhathi kunobufakazi ukuthi akuwona wonke umbono ngomqondo ovulekile futhi sihlobene ngokuqondile namaphuzu welithi "crap".
Meaning of igama elithi "crap"
Ukuhlaziya imithombo iyatholakala, kungenzeka ukuba avumelane ezahlukeneyo ezimbili eziyinhloko ukuqonda incazelo yegama elithi:
amanga, ukuqamba amanga, falsification, ukukhwabanisa, ukwehluleka, ukwehluleka (cishe zonke kuholele omqondofana enjalo);
crap - senzo, okwaphumela esimweni esingajabulisi, inkinga oba namahloni isilinganiso ukuwa, ilahlekelwa igunya (kulo mongo, uchaza lokho okushiwo abambalwa kakhulu emithonjeni).
Esikhathini yesibili icala izibonelo ezivela lobugebengu, umculo noma intsha isitsotsi. Amasayithi amaningi ngokuzinikela nesiko inkhulumo lebhalwako, waphawula ukuthi ukuthandwa igama elithi "crap" manje kakhulu anda, kodwa kuyathakazelisa ukuthi ingxenye yamasiko umphakathi akacabangi wonke amagama anzima izwi.
Icubungula incazelo yegama elithi "crap", akunakwenzeka ingasaphathwa sici esisodwa ngaphezulu. Ngento yangaphandle (ulwazi, isenzo) kanye umbono bebodwa, njengoba umthetho, isenzo, okuyinto eza ngenxa yokuthi buyini ngempela ukubaluleka izwi - yizinto ezimbili ezahlukene.
Incazelo yegama elithi "crap"
Umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle emphakathini, musa ukulandela ubudlelwano elisungulwe ke futhi imithetho yokusetshenziswa yabo. Ulimi kanye izwi ukudlala lapha indima ebaluleke kunazo zonke, kodwa akunakwenzeka ukwakha value Laje ngokuthi "lokhu lapha" Asisho into esemqoka: akunandaba ukuthi izwi (ungahlala usebenzise lahlotshaniswa wombhalo okukanye ezihlakaniphile) lapho ukhuluma ngalokho kukhona okuthile okubi, omubi, sithwele umonakalo noma unbalance.
Ngokuvamile, ukwenza izinqumo noma chaza inshokutsi yetinhlobo amazwi - umsebenzi elingabongi. Wonke umuntu umbono wabo siqu futhi bonke abantu becabanga ukuthi kulungile, usebenzisa kuyizwi "crap" maqondana nezinye imicabango yabantu. Unquma kanjani okuyiqiniso amanga, na?
Kungakhathaliseki ukuthi kakhulu ezihlakaniphile abafundile futhi azi- elilodwa noma kwenye umhlaziyi, yena bangase baphikise ngokuthi ukusetshenziswa kwegama elithi "crap" landulelwa elithi: ukwehluleka ukufeza umgomo, imiphumela emibi, imiphumela emibi, imiphumela emibi, njll ...
Kulula ukuchaza lokhu njengendaba eyiqiniso ukuphika isimo, njengokuthi kolwazi wathola, isenzo noma isidingo sokwenza lokho buyenyanyeka izindinganiso zokuziphatha, okwenzeka kuye uqobo, ulwazi nemibono.
Kulesisimo-ke, lokho okushiwo kuyinto crap lula - lokhu inkulumo ecacile kahle maqondana umcimbi noma ulwazi.
Isayensi Ngokwesibonelo: zezemfundo umfundi
Umfundi balithanda inkinga ingqondo yokufakelwa futhi wadala isiqondiso yezesayensi sendlela ukwakha uhlelo oluxube intelligence yemvelo. Wayibiza ngokuthi chipiotika (Human Intelligence Programming) wathunyelwa esavela ephephabhukwini lesayensi i anikezelwe izinhlelo nobuchwepheshe eliphezulu, isihloko. Umhleli oyinhloko wephephandaba kwaba academician ovelele, iminyaka eminingi wahlanganyela nenselele izinhlelo ekuthuthukiseni kwadingeka amaphepha isayensi eziningi inkinga intelligence yokufakelwa.
Umfundi akazange ake sithi lazhanulsya. Kuleyo minyaka, futhi izintaba - akunankinga okukhulu. Academician ecacisiwe ngenye indlela. Semfundo (lapho afundela umfundi) landizela sicelosikhalo umkhandlu kwalo ngokwesayensi. Kodwa lesi sifundazwe ngokuvamile nokuzitika maqondana inhlokodolobha, lokhu crap yayingakuthinti.
Household Ngokwesibonelo: umshayeli futhi umshini
Yiba imoto esetshenziswa ukuba ehlonishwayo, kodwa manje kubalulekile. Kodwa ukufuya imoto kuholela isisindo ukuzibophezela imicikilisho ezidingekayo, izinqubo, kufaka phakathi isidingo sokuhlolwa gqwa.
Imoto entsha ibhalisiwe kahle, izici, futhi umnikazi lucky wafika wokuhlola lobuchwepheshe kwento. Umshini is entsha, ayisetshenziswa, kodwa luhlolo ayizange iphumelele. Isizathu - ikhithi akuyona ezifuywayo, ezivela kumkhiqizi wemoto.
Umhloli akazange bebona kudingekile sokucabangisisa ngesinqumo salo. Umphumela: omunye umnikazi imoto sesamukele ulwazi ukuthi le lokudlela, waya ukuthenga entsha yasekhaya lokuqala zosizo.
Umbandela isikhathi kanye nencazelo
Eminyakeni eminingi kamuva, umagazini wenqaba ukunyathelisa isihloko, egqwalile ekujuleni kabusha, hhayi lo intelligence yokufakelwa ithole ukuma yangempela, kodwa liveza umqondo wahlala. Student ke akakayakhi, kodwa umqondo kulokhu? Umqondo ukuthonywa uhlelo lwakhe, futhi bangakwazi ukuzivumelanisa noshintsho siqu zokusebenza imvelo kanye ikhasimende nezidingo zabo. Futhi lokhu - hhayi zingcolile ngempela. Kungabakhona lazhey lokho okusebenzayo futhi unikeza umphumela.
Umhloli waphinde wabonisa ukuthi siqaphile ngokweqile, kodwa kutholwe sikhathi esinamandla yemoto Umthandi ongazange ngizisole imali futhi kwaba Ukuhlolwa okuphumelelayo komunye esiteshini, bese bafaka isikhalazo enkantolo. Umhloli sichithiwe. Bathi isikhathi selapha wonke amanxeba, kodwa akazange athi leli phutha kuvuma othile ungabuyela futhi umthombo lazhanut. Isikhathi njalo liqhubekela phambili, kodwa hhayi yonke imicimbi ilandelwa ezinye njengenhlangano ihange, ngephutha lehla, udonse emuva ku esedlule.
Ngakho-ke, siyaqonda ukuthi le lokudlela (izwi nezibonelo babe ngaphezulu). Ukuhlonza Ukugula kuba osheshayo ngokwemvelo. Imininingwane Tholakele kwakukhona umcimbi, landela izinyathelo futhi ngokushesha ukubuka - kuba crap.
Nokho, ulwazi kubika ayiphelele, enganembile. Umcimbi ngeke ziboniswe phezu, futhi uma sizila kumuntu wesithathu noma isenzo angase abulawe kanye nenjongo yabo.
Kodwa ngisho kokuhlola zonke ngamaqiniso nezimo, umbono wokugcina ukuthi kukhona crap, nokuthi - akukho, kudinga isikhathi. Kungenzeka ukuthi kuzodingeka ulinde, hhayi ngonyaka noma emibili ngaphambi imfihlakalo.
UValentina. Yini igama: incazelo uhlamvu, empilweni yakho
Ikhefu lihluke kanjani ekudleni? Izici ezihlukile zokudlela ezivela e-cafe
Ukumisa i-Umlando wakhe omfushane: izinhlobo, izindlela lokunamathelisa
KaMose ukuze okubhukuda. Ubuhlobo obuseduze KaMose e-swimming pool